February 6, 2020 - MM Live News
ကံကောငျးခွငျး သဘောဆောငျတဲ့ လကျကောကျပျေါက တွိဂံပုံ…
February 6, 2020 February 7, 2020 MM Live News
Rascette lines တွေဆိုတာ လက်ဖဝါး နဲ့ လက်ကြား လက်ကောက်ဝတ် အပေါ်က ကန့်ပေးထားတဲ့ အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ကွေးကောက်တဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လက်ကောက်ဝတ် အစင်း အကြောင်း လို့လည်း သိရတဲ့ rascette lines များကို လက္ခဏာဗေဒ မှာ အရေး မပါတဲ့ မျဉ်းကြောင်းများ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ လူအများစုမှာတစ်ခုတည်းလည်း ရှိနိုင်ပေမယ့် လက်ကောက်အရေးအကြောင်း ၂ခု သို့မဟုတ် ၃ ခုရှိကြပါတယ် ….ဒါပေမယ့် လက်ကောက် အစင်းအကြောင်း ၄ ခုရှိခြင်းမှာ အသက် ၁၀၀ အသက်ရှင်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…. အမှန်တော့ ဒီ မျဉ်းကောက်ကြောင်းများက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘဝကံကြမ္မာနဲ့ အခွင့် အလမ်းတွေ […]
သငျ့လကျကောကျဝတျပျေါမှာ ဘယျနှဈကွောငျးပါလဲ ပွီးရငျ ဘာတှဖွေဈတတျသလဲ…
February 6, 2020 MM Live News
လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေလိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး….. ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတစ်ယောက်မှာ လက်ကောက်ဝတ်မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွေကတော့…. လမ်းကြောင်း ၁ အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းထင်ရှားပြီး တစ်ဆက်တည်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းက တကယ်လို့ မှိန်းဖျော့နေမယ်၊ အပြတ်တွေများနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းပြီးတော့ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်း ၂ ဒုတိယမြောက်လမ်းကြောင်းက ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပြပါတယ်။ […]
အကွိုကျဆုံး ပုံကို ရှေးလိုကျပါ သငျ့ရဲ့ တကယျ့ အတှငျးစိတျကို ပွောပွပေးလိမျ့မယျ
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာ များနိုင်ပါတယ်။ ကဲ အကြိုက်ဆုံး ပုံ ရွေးပြီးပြီလား? ပုံ (၁) သင်က နံပါတ် ၁ ပုံကို ရွေးခဲ့တယ် ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရော သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ အကူအညီတောင်းရင် ပေးဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က သင်က အားနာလွယ်တယ်။ ကူညီပေးလွယ်လိုက်တာ၊ စိတ်ပျော့လိုက်တာလို့ ထင်နေပေမဲ့ သူတို့အထင်က မှားယွင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့် သင့်ကိုလည်း တကယ်တန်ဖိုးထား ချစ်ခင်ပေးတဲ့ […]
February 6, 2020 February 6, 2020 MM Live News
စနေ သားသမီးလေးတှအေ‌ကွောငျး စနသေားသမီးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ စိတျသဘောထားပွညျ့ဝကွတယျ….စိတျထားကောငျးကွတယျ… သငျဟာ စနသေားသမီးနဲ့ ခဈြသူဖွဈနပေီဆိုရငျ ဂုဏျယူလိုကျပါတော့….သူတို့ကိုလကျလှတျဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့… စနသေားသမီးတှကေ သူ့ရဲ့ခဈြသူကို ပြျောရှငျအောငျထားကွတယျ…သူ့ခဈြသူကို စိတျညဈစမေယျ့အပွုအမူမြိုးကို လုပျလမေ့ရှိဘူး။ တကယျလို့ သူ့ခဈြသူက အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့စိတျညဈနရေငျလညျး ပြျောရှငျလာအောငျလုပျပေးတတျကွတယျ…. ဒါကလညျးသူတို့ရဲ့ဗီဇလို့ပွောရမှာပေါ့….စနသေားသမီးတှကေ နညျးနညျးတော့စိတျကွီးကွတယျ…. သူတို့ကို မဟုတျတာပွောရငျ မကွိုကျကွဘူး…..စတာပဲဖွဈဖွဈ အတညျပွောတာပဲ ဖွဈဖွဈ မကွိုကျကွဘူး….. ဒါပမေယျ့ စိတျတိုတဲ့အခြိနျကလညျး နာရီဝကျတောငျမကွာဘူး….စနသေားသမီးတှကေအခဈြကွီးကွတယျ….. လူတဈယောကျကိုခဈြပီဆိုရငျ သူ့ရဲ့ပစ်စုပ်ပနျကိုမကွညျ့ဘူး…. ရူးရူးမူးမူးစှဲစှဲလနျးလနျးခဈြတတျကွတယျ….. သူ့ခဈြသူရဲ့အတိတျက မကောငျးဘူးဆိုရငျတောငျ အနာဂတျမှာ သူ့ခဈြသူကို သခြောတိုငျပငျပွီးပွုပွငျပေးတတျကွတယျ….. စနသေားသမီးအမြားစုကတော့ ရုပျရညျအားဖွငျ့ ရုပျဆိုးတဲ့သူမရှိကွဘူး….ရှိခဲ့ရငျလညျးနညျးတယျ … ရုပျရညျအသငျ့အတငျ့ရှိတဲ့သူကလညျး သူ့ရဲ့fashion နဲ့တငျကွှလေောကျတယျ…..ရုပျခြောပီဆိုရငျတော့ ဘယျသူမှလိုကျမမှီဘူး…. စနသေားသမီးတှကေ အရပျအားဖွငျ့ အရမျးလညျးမရှညျဘူး….အရမျးလညျးမပုကွဘူး …. အနတေျောလေးနဲ့ …ခဈြစရာအရမျးကွောငျကွတယျ… စကားပွောတဲ့အခြိနျတို့ ရာယျလိုကျတဲ့ အခြိနျတှကေတော့ စနသေးသာမီးတှရေဲ့ […]
ကွာသပတေးသားသ်မီးမြား ဘဝတဈသကျတာ အန်တရာယျကငျး၍ လာဘျရှငျရနျအတှကျ အကောငျးဆုံးယတွာ
ကြာသပ​တေး သားသ္မီးများအတွက်​ အန္တရာယ်​ကင်း၍ လာဘ်​ရွှင်​ရန်​အတွက်​ သီဟိုသရက်​ညွှန့်​ နှင့်​ ​ဒေါနပန်းကို ဘုရား​ပန်းအိုး တွင်​၄င်း ၊ တံခါး​ပေါက်​ တွင်​၄င်း ၊ထိုးပါ ။ ( ၇ )ရက်​ ၁ကြိမ်​ ​ရေလဲ ​ပေးပါ ။ အိမ်​၏ အ​ရှေ့မြောက်​အရပ်​တွင်​ သီးပင်​ ၊( သို့ ) ငှက်​​ပျောပင်​ကို စိုက်​ထားပါ ။ စိုက်​ရမည့်​ နည်းမှာ….. တွင်းကို တစ်​​ထောင့်​ထွာခန့်​တူးပြီး ​မြေကြီးထဲတွင်​ ​ကျောက်​​ရောင်​စုံမျိုးစုံ ( ၇ )မျိုး ၊ ဆန်​တစ်​ဆုပ်​ ၊ ​မြေဇာမြက်​တစ်​ဆုပ်​ ၊ ​ကြေးနီပိုက်​ဆံ တစ်​ပြား ၊ သံ​ချောင်း တစ်​​ချောင်းကို ​ရော၍ထည့်​ပြီးလျှင်​ သစ်​ပင်​ကို ​ရွှေရည်​ငွေရည်​ ​လောင်းပါ ။ သစ်​ပင်​စိုက်​မည့်​ […]
တိုငျခငျြတာထကျ အသနားခံခငျြတာ ကြှနျတျောတို့ကို ကူညီပါ ကြှနျတျောတို့ ရှာကွီး ပကျြတော့မှာမို့လို့
“တိုင်ချင်တာထက် အသနားခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပျက်တော့မှာမို့လို့” ကျောက်စုတ်စက်လှေတွေကြောင့် စိုက်ခင်းတွေ ကမ်းပါးတွေပြိုကျမှု ဒေသခံများ စိတ်ပူ ဖေဖော်ဝါရီ(၆) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ကျောက်စုတ်တဲ့စက်လှေတွေကြောင့် ရွှေတောင်မြို့နယ် ညောင်စာရေးအုပ်စုထဲက ကျေးရွာခြောက်ရွာမှာ စိုက်ပျိုးနေတဲ့မြေတွေ ကမ်းပါးပြိုကျတဲ့အထဲ ပါသွားပြီး ကျေးရွာတရွာမှာလည်း ပြောင်းရွှေ့ရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရပါတယ်။ ညောင်စာရေးအုပ်စုထဲမှာ အရင်က စိုက်ပျိုးမြေ ၂ဝဝဝကျော်ရှိတဲ့အနက် လက်ရှိမှာ ဧက ၁ဝဝဝကျော်ဟာ ကမ်းပါးပြိုတဲ့အထဲပါသွားပြီလို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ “တိုင်ချင်တာထက် အသနားခံချင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ ကျွန်တော်တို့ ရွာကြီး ပျက်တော့မှာမို့လို့” ဟု ဒေသခံ ဦးသောင်းရွှေ မှ အခုလိုပြောပါတယ်။ဝေဖုန်းစံ(ပြည်) Credit to #AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပြည်သူ့ ကူညီရေး၊ ပြည်သူ့ အသံ […]
ဘယျလောကျဝေးဝေး ရစေကျရှိတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့အနားကို အလိုလို ရောကျလာမှာပါ…
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရေစက်ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အနား အလိုလို ရောက်လာမှာပဲ…. ဘယ်လောက်နီးနီး ရေစက်ကုန်သွားတဲ့ သူတွေကတော့ ခွဲကြရဦးမယ်…. ဘဝဆိုတာ… အရာရာစိတ်တိုင်းကျတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး… စိတ်မပျက်ပါနဲ့…. ဒုက္ခဆိုတာရှိလို့ သုခအမှန်ရှာရင်းနဲ့ သစ္စာကို ရှာတွေ့သွားကြတာပဲ မဟုတ်လား… လောကနိယာမတွေက ရိုးရိုးလေးတွေးရင် ရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတယ်…. ဆုံလာကြသမျှ တစ်နေ့ခွဲရမယ်… ဖြစ်လာတာမှန်သမျှ တစ်နေ့ပျက်ရမယ်.. အနှေးနဲ့ အမြန်ပဲ… ဆွဲထားလို့ ရရင်တောင် ခဏပါပဲ…. ဘာကိုမှ တရားသေစွဲမထားတဲ့သူဟာ လွတ်လပ်တယ်…. ဘာကိုမှဆုပ်ကိုင် မထားတဲ့သူဟာ ပေါ့ပါးတယ်… အလိုက်သင့်လေးနေတတ်တဲ့ သူဟာ ငြိမ်းချမ်းပါလိမ့်မယ်…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ… လက်ရှိတွေးနေတဲ့ အတွေးကိုကောင်းအောင်တွေး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ် လက်ရှိတွေ့နေတဲ့သူကို အကောင်းဆုံးဆက်ဆံ လက်ရှိအချိန်လေးကိုပဲ အကောင်းဆုံး တတ်နိုင်သလောက် ဂရုစိုက်နေရင် ရပါပြီ…. ဒါ ကိုယ့်အနာဂါတ်အတွက် အကောင်းဆုံး အရင်းအနှီး […]
အခှနျလာဆောငျတဲ့သူကို ခဉျြသှားအောငျ လုပျနိုငျတဲ့ မွနျမာပွညျက အခှနျစနဈ…
အခွန်​လာ​ဆောင်​တဲ့သူကို ချဉ်​သွား​အောင်​ လုပ်​နိုင်​တဲ့ မြန်​မာပြည်က​ အခွန်​စနစ်​… မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အခွန်မဆောင်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ။ ၂၀၁၇ တုန်းက အိမ်ဌားခ တနှစ်စာ သိန်း ၉၆၀ ရတဲ့အပေါ် သက်သာခွင့် သိန်း ၁၀၀ နှုတ်အပြီး ဝင်ငွေခွန် (10%) သိန်း ၈၀ ကျော် (နိုင်ငံ့သားကောင်းပီသစွာ အခွန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ခဲ့တယ် (ငွေဖြူ သိန်း ၈၆၀ ရမယ်ထင်ခဲ့တယ်) အခု ၂၀၂၀ မှာ ကားတွေနာမည်ပေါက်ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ အိမ်ကကား ၂ စီးစာအတွက် ဒီနေ့ အခွန်ရုံးမှာ claim လုပ်ဖို့သွားတယ်။၂၀၁၇ တုန်းကဆောင်ထားတဲ့အခွန် သိန်း ၈၀ ကျော်က ဝင်ငွေခွန် (10%) ဘဲဆောင်ထားတယ်။ အိမ်ဌားတွေဘက်က ကုန်သွယ်ခွန် commercial tax […]
လူတှမေသိသေးတဲ့ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ပဲသှေး ဆိုတာ ဘာလဲသိအောငျဒါလေးဖတျကွညျ့ပေးပါအုံးနျော…
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဆို ပဲသွေးလေးနဲ့မှ ကြိုက်တာပါဆို ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ ပဲသွေးဟာ စားသင့်တဲ့ အစာ တစ်ခု လား ? ပဲသွေး ဟု ဈေးထဲမှာရောင်းနေသော ပစ္စည်းများမှာ ပဲသွေးလဲမဟုတ်၊ ဘဲသွေးလဲမဟုတ်၊ အမဲသွေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာ အမဲသွေးကို ဆားနဲ့ ရေနဲ့ရောပီး ပြုတ်..ပီးရင် ကြာရှည်ခံအောင် လူသေတွေမှာသုံးတဲ့ ဖော်မလင်ကို ထည့်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်….. တ ချို့က သတ်သတ်လွတ်ဆိုပီး ပဲသွေးကို စားမိတတ်ကြသလို၊ အမဲသားမစားဘူးဆိုပြီးတော့လည်း ပဲသွေးကို စားမိတတ်ကြပါတယ်။ မုန့်ဟ င်းခါး အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲများတွင်လဲ ထည့်စားတတ်ကြပါတယ်။ ပဲသွေးဟာ တကယ်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ FDA ကနေရှောင်တခင် လာရောက်စစ်ဆေးပြီး ဖော်မလင်ပါတဲ့ ပဲသွေးတွေကို ဖျက်စီးပစ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေပါ ဖော်ပြပေးလိုက် […]